WARBIXIN: Ma ogtahay in afartii jeer ee ugu dambeysay oo ay Real Madrid hanatay horyaalka La Liga inay sababtay kala tag ku yimaada Kooxda Barcelona? – Gool FM
(Madrid) 01 Seb 2020. Rikoorka Real Madrid ee hanashada horyaalka La Liga sanadihii ugu dambeeyay waxa uu ahaa mid liita, marka la la barbardhigo awooddeeda iyo taariikhda fog ee ay ku leedahay kubadda cagta dalka Spain.
Inkastoo sanadihii dambe dhanka horyaalka ku guuleysigiisa ay ku awood rooneyd kooxda Barcelona, haddana waxaa jirto xaqiiqo ah in marka ay Los Blancos hanato La Liga ay si dadban u saameyneysay Naadiga Barca.
Haddii si kale loo dhigo, afartii jeer ee ugu dambeysay oo ay Real Madrid ku guuleysatay horyaalka dalka Spain, waxay dhalineysay in Barcelona uu ku yimaado kala carar, iyagoo luminayay shaqsiyaad muhiim u ah sida Ronaldinho iyo Pep Guardiola.
13-kii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay La Liga, Los Merengues waxay hanatay kaliya afar jeer, halka inta kale ay Barcelona ku dakeyneysay, marka laga reebo hal jeer oo ay Atletico Madrid ka dhex gashay.
Sanadihii loo caleemo saaray Real Madrid horyaalnimada dalka Spain waxay kala ahaayeen 2008, 2012, 2017 iyo 2020, waxaana afartaas sanaba Blaugrana ku yimid tafaraaruq sababay in la kala tago, waxaana sanadkan 2020 la filayaa inuu dhaco kala taggii taariikhda ugu weynaa, xilli miiska ay saaran yihiin madaxweynaha kooxda Josep Maria Bartomeu iyo xiddigii ugu weynaa taariikha kooxda ka dhisan gobolka Catalonia ee Lionel Messi.
1- Bixitaanka Ronaldinho iyo nadiifintii Pep Guardiola ee qolka labiska (2008)
Si naadir ah ayuu u helaa ammaanta uu mudan yahay Frank Rijkaard oo ahaa macallin guulo dahabi ah ku hoggaamiyay naadiga Barcelona.
Marka laga soo tago inuu soo saaray noocii ugu wanaagsanaa ee Ronaldinho iyo inuu amaah ku soo qaatay Edgar Davids, waxa uu sidoo kale dunida baray wiil yar oo mucjiso lasoo baxay, kaasoo hadda ah xiddiga ugu weyn taariikha Barca (Messi), waxaana uu usoo dallacsiiyay kooxda waa weyn.
Macallinkii reer Netherlands ayaa sidoo kale Blaugrana ku hoggaamiyay hanashada tartanka UEFA Champions League sanadkii 2006, kaddib markii ay final-kii ku garaaceen kooxda Arsenal ciyaar ka dhacday caasimadda Faransiiska ee Paris.
Balse wax walba ayaa is baddelay markii ay Real Madrid hanatay horyaalka La Liga xilli ciyaareedkii 2007/08, iyagoo sidoo kale waji gabax kala kulmay kooxda Manchester United oo ka reebtay tartanka horyaallada Yurub wareeggiisa afar-dhammaadka, inkastoo niyad jabka ugu weyn uu ahaa inay ku dhammeysteen La Liga, iyagoo 18 dhibcood ka hooseeya kooxda horyaalka hanatay.
Joan Laporta oo ahaa madaxweynihii Barca ayaa la la xiriirinayay inuu waqti guuleed u ruqaansan doono, inkastoo ay jirtay dhaliil ah inuu goor hore kooxda u soo iibin doono David Beckham inta uusan u soo iibin Ronaldinho.
Balse Laporta ayaa qaatay 2008 go’aan aanan la saadaalin oo ahaa inuu shaqada ka ceyriyay Rijkaard, isagoo si adag ugu qamaartamay tababare aanan waligiis leylin koox heerka sare ah.
Macallinka qamaarka lagu keenay waxa uu ahaa Pep Guardiola, kaasoo la yimid qorsho is baddel ah, waxaana qorshihiisa uu sababay inuu naadiga ka tago hoggaankii ciyaartoyda ee Ronaldinho, si la mid ah khadkii dhexe ee reer Portugal ee Deco.
Pep ayaa iska fasaxa labadan xiddig si uu door muuqda kooxda ugu dhex yeesho Lionel Messi oo da’ yar ahaa, xilli ay xusid mudan tahay in mucjisadii Brazil uu ahaa mid ka mid ah xiddigaha ugu wanaagsan kubadda cagta xilligaas.
2- Guardiola iyo dhammaadkii silsiladda dahabiga (2012)
Inta badan dadka falanqeeya kubadda cagta Yurub ayaa isku waafaqsan in intii u dhexeysay 2008 illaa 2012 uu ahaa waqtigii ugu wanaagsanaa taariikhda Barcelona, iyadoo Pep Guardiola uu naadigan ku soo biiriyay farsamo ciyaareed ku cusub kubadda cagta casriga ah, taasoo la mid ah tii lagu bartay Johan Cruyff.
Xilli ciyaareedkii labaad ee xukunka Jose Mourinho, Kooxda Real Madrid ayaa hanatay horyaalka La Liga, waxaana taasi ay baabi’isay dulqaadkii Barca ay u heysay Pep Guardiola oo markii horeba ku taagnaa cago aan taag lahayn.
Waxaa jiray xiriir aan wanaagsaneyn oo u dhexeeyay macallinka hadda hor kaca Manchester City iyo maamulka kooxda Blaugrana, taasoo sabab u noqotay inuu albaabka ka dago Tababaraha reer Spain ee Pep Guardiola.
3- Burburintii heshiiska Neymar iyo Aargoosigii PSG (2017)
Ku biiristii Neymar Jr ee kooxda Paris Sain-Germain waxay Barcelona ku ridday dhabar jab culus, kaasoo illaa iyo hadda aysan kasoo kabsan.
Kaddib markii uu xukunkiisii ugu horreeyay ku guuleystay tartanka Champions League, Zinedine Zidane ayaa si cad u sheegay inay ka go’an tahay in La Liga uu u soo gacan geliyo Real Madrid, waana uu ka dhabeeyay fasal ciyaareedkii 2016/17, waxaan taas ay Barcelona ka dhigtay inay kaliya la hoydaan Copa del Rey xilli ciyaareedkaas.
PSG oo ka gadoodsan guuldarradii taariikhiga ahayd ee k asoo gaartay Barcelona sanad ciyaareedkaas tartanka Champions League wareegga rubac-dhammaadka ayaa xusul duub u gashay inay Barcelona kaga aargoosato dhanka suuqa, maadaama kooxda reer Spain uu ku jiray damac ah la saxiixasha Marco Verratti oo khadka dhexe kaga ciyaara dhiggooda.
Kooxda Faransiiska ah ayaa heshiis qaali ah ku qancisay Neymar Jr oo hoggaamiye ka ahaa soo laabashadii ugu weyneyd tartanka horyaallada Yurub, waxaana xigay inay bixiyaan 222 milyan oo Euro oo lagu jebinayo heshiiskii uu weeraryahanka reer Brazil kula jiray Barcelona.
Waxaa la rumeysanyahay tagitaankaas inuu hadda sabab u yahay waddada uu Messi kaga baxayo Albaabka Garoonka Camp Nou.
4- Go’aanka Messi iyo Burofax (2020)
Lionel Messi ayaa ogeysiiyay kooxdiisa Barcelona inuu go’aansaday ka tagista naadiga, sidoo kalena uu doonayo in heshiiskiisa la burburiyo, isagoo u maray nidaamka loo yaqaano Burofax oo ah nidaam xiriir ganacsi oo dukumiintayada lagama maarmaanka ah la isugu diro.
Haddii ay rumowdo inuu Messi ka hayaamo garoonka Camp Nou, waxay ka saameyn badnaan doontaa saddexdii dhacdo ee hore xitaa haddii ay hal xagaa ku dhici lahaayeen.
Sanado maamul xumo ah oo uu kooxdan ku hoggaaminayay Josep Maria Bartomeu ayaa waxay sabab u noqotay in kabtanka kooxda uu jahwareer badan galo, taasoo dardar galisay inuu dalbado in la fasaxo.
Waa markii ugu horreysay 12-kii xilli ciyaareed ee lasoo dhaafay in Barcelona ay la hoyato koob la’aan hal xilli ciyaareed, tii oo ay jirto in laba tababare shaqada kooxda laga ceyriyay.
Waxaa intaas u sii dheer, guuldarradii foosha xumeyd ee ay kala kulmeen Bayern Munich tartanka Champions League, halka Zinedine Zidane uu ka faa’ideystay habacsanaanta kooxda kula tartameysay horyaalka, isagoo si xarrago leh ku qaaday La Liga.
Barca ayaa gashay xaalad naxdin leh kaddib markii ay soo gaartay warqad ku timid nidaamka Burofax oo uu soo diray Lionel Messi, isagoo dalbanaya inuu kooxda ka tago, heshiiskiisana la burburiyo, isagoo ku doodaya in heshiiskiisa uu burburin karo dhammaadka xilli ciyaareed walba.
Dood sharciyeysan ayay labada dhinac wada gali doonaan, taasoo ugu dambeyn suuro galin karta in kabtanka Argentina uu u guuro dhanka magaalada Manchester ee dalka England si uu ugu biiro Kooxda Manchester City oo si weyn loola xiriirinayo.